Home Wararka Ururka Al Shabaab oo dagaal culus kula wareegtay Degaanka Qalimoow
Wararka ka imaanaya Gobolka Shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in saaka Al-shabaab dagaal culus kula wareegtay Degaanka Qaliloow oo u dhexeeya magaalooyinka Jowhar iyo Balcad.
Dagaal xooggan oo u dhexeeya Al-shabaab iyo Ciidamada dowladda ayaa ka dhacay Degaanka Qalimoow halkaas oo markii dambe si buuxda Al-shabaab ula wareegtay.
Khasaare kala duwan ayaa ka dhashay dagaalkaas inkastoo aan weli faahfaahin sugan laga helin. Labada dhinac ee dowladda iyo Al-shabaab midna weli kama hadlin khasaaraha ka dhashay dagaalkaas.
Previous articleFarmaajo oo taageeray Natiijada Shirkii Golaha Wadatashiga Qaran ee RW Rooble Hoggaaminayay
Next articleMW Maraykanka oo qof Soomaali ah xil sare uga magacaabay dowladiisa
Saraakiil Shabaab ah oo uu Fahad Yasin Kenya u diray oo...
Villa Somalia oo qiratay in Axmed Madoobe kaga adkaaday siyaasadda